Waxaa qoray admin on 21-02-02
Farqiga udhaxeeya ciida iyo toogashada
Labada geeddi-socodba waxaa loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo dusha sare ee shaqada oo laga saaro boodhka.Sand Bunch waa geedi socod xoqan oo loo adeegsado in lagu nadiifiyo sagxadaha iyo burburka. Caadi ahaan waxaa loo adeegsadaa kahor rinjiyeynta ama geedi socodka daahan. Waxay u adeegsataa warbaahin af badan, ama ciid, si ay dusha sare ugu xoqdo xoogaa sida jiiq jiiq ah ...
Sidee Looga Saaraa miridhku Sand Sand
Miridhku ciidaha ka soo baxa baabuurka wuxuu sahlayaa soo celinta iyo rinjiga. Waxaad u isticmaali kartaa noocyada kala duwan ee warbaahinta sandblast, waxay kuxirantahay birta gaariga iyo cabirka dusha sare. Sandblasting waa daruuri ka hor intaadan bilaabin inaad soo celiso Qashinka ka fogee goobta shaqada oo waa weyn enoug ...
Doorka mashiinka qarxa ciida iyo mashiinka wax qarxiya
Qalabka qarxinta ciidda ayaa door muhiim ah ka ciyaara geedi socodka, dabcan, waxaa jira warshado badan oo kale, alaabooyin badan ayaa loo isticmaalay mashiinka qarxa ciidda si wax looga qabto. Mashiinka-ciida-engeeg waa adeegsiga hawo ciriiri ah, ciidda, xawaare sare oo ay haleeshay qori biiyaha meesha waxsoosaarka dusha sare ...
Toogasho Machine-engeeg - Codsiyada
Waxaa jira codsiyo badan oo ah mashiinnada qarxa toogashada. Codsiga ugu horeeya uguna muhiimsan waa nadiifinta shubista si looga saaro ciida dabacsan oo gubatay iyo cabirka ka sameysan shubka birta iyo kuwa aan birta ahayn. Nidaamka toogashada toogashada wuxuu yareeyaa jilicsanaanta wuxuuna kordhiyaa cadaadiska awoodda taagan ee aluminium ...
qayb kala duwan oo ah mashiinka ciida
Saddex qaybood oo kala duwan oo ku saabsan mashiinka sandblasting Muddeynta Sandblasting inta badan waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo kala duwan: xoqidda lafteeda, qalabka wax lagu duubo, iyo qalabka wax lagu shubo. Fududeynta iyo nadiifinta walxaha yar yar, goob shaqo oo lagu hayo gabalka quraaradda ayaa sidoo kale loo baahan yahay, sida nooc ka mid ah ururinta ...
waa maxay Shot blaster machine
Mashiinka wax lagu toogto waa mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan ee qalabka wax lagu nadiifiyo. Dabcan ma jiro hal mashiin oo keliya oo wax lagu rido, maxaa yeelay sidoo kale waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loo adeegsado ciida. Mashiinka wax lagu toogto wuxuu yeelan karaa afar, lix, sideed ama xitaa giraangiro badan, wuxuuna yeelan karaa habka loo rogi karo ee ...
Qiimaha mashiinka engeeg
Qiimaha mashiinka qarxa ee HST waa midka ugu jaban isla shirkadaha soo saarayaasha. Qiimaha mashiinka sandblasting, wax yar ayaan ka ogahay qiimaha khadka tooska ah ee mashiinka qarxa, iyo macmiilka taleefanka kula tashanaya qaar ka mid ah mashiinka qarxa ee soo socda mashiinka mashiinka qarxa.